Ukufikelela ngokuVulekileyo- iAfricArXiv
By UJohanssen Obanda, iinyanga 3 iinyanga 3 edlulileyo
By UJohanssen Obanda, iinyanga 4 iinyanga 4 edlulileyo
UFlorence Piron wayengumbhali wezinto zabantu, kwaye esebenza njenge-profesa kwiSebe lezoLwazi kunye noNxibelelwano kwiYunivesithi yaseLaval eQuebec, Canada. Njengommeli oqinileyo woFikelelo oluVulekileyo, wafundisa ukucinga okunzulu ngezifundo ezininzi kwizifundo zokuziphatha, idemokhrasi kunye nokuhlala kunye kwaye wayephanda ngolangazelelo amakhonkco Funda ngokugqithisileyo…
By Iqela leAfrikaArXiv, iinyanga 5 iinyanga 5 edlulileyo
By UJohanssen Obanda, iinyanga 5 iinyanga 4 edlulileyo
Umceli mngeni wokuFumaneka
I-AfricArXiv isebenza ngokubambisana neeMephu zoLwazi oluVulekileyo ukonyusa ukubonakala kophando lwase-Afrika. Phakathi kobunzima bokufunyanwa, intsebenziswano yethu iza kuqhubela phambili iSayensi evulekileyo kunye nokuFikelela ngokuVulekileyo kubaphandi baseAfrika kwilizwekazi lase-Afrika. Ngokweenkcukacha, intsebenziswano yethu iya: Ukukhuthaza uphando lwe-Afrika kwihlabathi liphela Foster Open Funda ngokugqithisileyo…
By UJohanssen Obanda, iinyanga 5 edlulileyo
Ukumisela iindlela zophando
I-AfricArXiv inegalelo kulawulo lobukoloniyali ngokukhuthaza ukuqondwa kokungalawulwa kwelizwe ngokoqobo. Ukwamkela ukungeniswa kwangaphambi kokubhala ngolwimi lwengingqi nolwimi lwasekhaya, kunye nokwenza ukuba ubunini bophando lwaseAfrika olwenziwe ngabantu baseAfrika ngokuseka indawo yolawulo yedijithali egunyazisiweyo, ephantsi kweAfrika kwilizwekazi laseAfrika.
By UJoel Onyango , iinyanga 5 iinyanga 5 edlulileyo
Ithuba lomsebenzi: Umphuhlisi wangaphambili weNkxaso yeNkxaso mali
Njengomphuhlisi wangaphambili okanye umntu onobuchwephesha onamava ngokufanayo, umenywa ngokufudumeleyo ukuba ubenegalelo ekugqityweni kwemithombo evulekileyo kunye nokuvulwa kwedatha yokufikelela 'kwiNkxaso-mali yokujonga abaphandi base-Afrika kunye namaxwebhu abenzi bomgaqo-nkqubo ayafumaneka ku-https: // uphando-db-docs.netlify.app/ Sijonge uncedo lokubeka phambili umphambili we Funda ngokugqithisileyo…
By UStefan Skupien, iinyanga 7 iinyanga 7 edlulileyo
Sijoyine kwi-Chatbot Africa kunye neNtetho yeNgqungquthela ye-AI
Ingxoxo ye-Chatbot Africa kunye neNtetho ye-AI yingqungquthela ebonakalayo kunye nomboniso weengcali zeshishini, ukwamkela i-AI yeNgxoxo, iiChatbots, intetho okanye itekhnoloji yelizwi, uyilo lwe-UX, iNLP kunye noMncedisi oSebenzayo.
By UJohanssen Obanda, iinyanga 7 iinyanga 7 edlulileyo
I-podcast: Ukwenza iNzululwazi yaseAfrika ibonakale
Iqela le-AfricArXiv libe negalelo kwisiqendu sesithathu seKhowudi yokuCinga, ipodcast 'kwisoftware, ubunjineli, uphando kunye nantoni na phakathi' eyenziwe nguPeter Schmidt woMbutho woPhando lweNjineli yeSoftware.
By UJohanssen Obanda, iinyanga 7 iinyanga 6 edlulileyo
IScienceOpen kunye neDyunivesithi yoMzantsi Afrika ziphehlelela i-UnisaRxiv
Indawo yethu yamaqabane eScienceOpen isebenzisane neDyunivesithi yoMzantsi Afrika (i-UNISA) Cinezela ukwenza iseva yoshicilelo i-UnisaRxiv. I-UnisaRxiv iya kuba liqonga lokuququzelela uphononongo oluvulekileyo loontanga lwemibhalo yesandla eprintiweyo kunye nokuvumela ukusasazwa ngokukhawuleza kweziphumo zakutsha nje kwizihloko ezahlukeneyo. Ubambiswano neSayensiOpen luyila Funda ngokugqithisileyo…
By UJohanssen Obanda, iinyanga 8 iinyanga 7 edlulileyo
1 2 ... 4 Okulandelayo